Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir oo lagu soo dhoweeyay dalka Sweden [Sawirro] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir oo lagu soo dhoweeyay dalka Sweden [Sawirro] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir oo lagu soo dhoweeyay dalka Sweden [Sawirro]
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa lagu soo dhoweeyay dalka Sweden oo uu dhowaan gaaray.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Malmo dalka Sweden ayaa u sameeyay guddoomiyaha xaflad soo dhoweyn ah, iyadoo ay ka soo qeyb galeen qeybaha kala duwan ee Jaaliyadda iyo xubno ka yimid dalka Denmark.
“Waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee Malmo, Sweden oo si wanaagsan oo sharaf leh iigu soo dhaweeyay magaalada Malmo. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Ku-xigeenka Duqa magaalada Malmo & siyaasiyiinta magaalada oo si wadajir ah inoo soo dhoweeyay…” ayuu yiri Taabit Cabdi oo socod ku maraya dalal ka mida Yurub iyo Waqooyiga Mareykanka.
Previous articleGuddiga Dastuurka Labada Aqal ee Baarlamaanka oo kalsoonidii kala laabtay Wasiirka Dastuurka [War-saxaafadeed kulul]
Next articleHay’ad Caalami ah oo Digniin ka soo saartay Macaluul ka dilaacda Soomaaliya sanadkan 2018